Nezvedu - Zishan Boka
Zishan Boka rakavambwa munaKurume 1984 uye iri muZhangzhou Guta, iro rinozivikanwa se "Chinese Chikafu Guta" uye "Chinese Canned Food Capital" uye "Chinese Mushroom Capital" kumaodzanyemba kweChina. Mushure memakore makumi matatu nemana ekuvandudzwa kwekuvandudza, izvozvi zvave kupera Iyo indasitiri yezvikafu inosanganisa hwaro hwekuvaka, kugadzirwa, kugadzirisa uye kushambadzira kunogona kugadzirisa angangoita mazana maviri ematani matani ezvirimwa zvakasiyana-siyana uye zvidimbu zvemugodhi pagore. Chinhu chenyika kiyi inotungamira bhizinesi mune zvekurima maindasitiri, yepamusoro gumi bhizinesi muChina yekumisheni indasitiri, uye inoenderera yakakosha bhizinesi mune yenyika chikafu indasitiri. Kwemakore mazhinji, yakaverengerwa se "mubhadhari mukuru" neZhangzhou Guta Hurumende.
Zishan inotarisa mukugadzirwa kwechikafu uye kunze kwenyika. Zvigadzirwa zvaro zvinosanganisira chikafu chemumagaba, mapundu, curry, mamineral mvura, zvigadzirwa zvegungwa zvine chando, michero nemiriwo inogadzira, kudyara fekitori howa uye zvimwe zvikamu zvikuru, zvinonyanya kutumirwa kuEurope, America, Japan, Southeast Asia, Russia uye nyika dzinopfuura makumi matanhatu Nyika uye matunhu, kodhi yekutengesa kunze kwenyika "Q51" inozivikanwa pasi rese, kunyanya muJapan, Germany nedzimwe nyika zvine zvido zvakaomarara pahunhu hwechikafu. Kuzivikanwa kwemusika kwakanyanya zvakanyanya. Zishan chikafu chinogadzirwa kunze kwenyika chinomiririra mufananidzo weChinese chikafu chemumagaba.
Zishan Boka inonamatira kuchinangwa che "kupa yakachengeteka, ine hutano, uye yakavimbiswa chikafu kune iyo nzanga"; kusimudzira chitendero chetsika tsika yekuti "kubvumira vatengi kutenga zvigadzirwa zveZishan zvakaenzana nekutenga rugare rwepfungwa, kudya zvigadzirwa zveZishan zvakaenzana nekudya zvine hutano", uye kwagara kuchisimbisa kukosha kwehunhu hwechikafu nekuchengetedzwa kwekuchengetedza, Yapfuura ISO9002, HACCP, "Hala", " Kosher ", US FDA chitupa, European BRC (Global Chikafu technical Standard) uye IFS (Yenyika Dzese Yekudya) chitupa. Zishan Boka rakatungamira uye rakatora chikamu mukuumba nekudzokorora kwematanhatu emunyika kana maindasitiri zviyero, kusanganisira "Canned Asparagus", "Canned Shellfish" uye "Canned Fish". Iboka rine gumi nematanhatu patent inoshanda, kusanganisira 1 yekugadzira patent, uye chiyero chekushandurwa kwesainzi uye tekinoroji kubudirira kunosvika 85%.
Pamusangano we2017 Xiamen BRIC, "Purple Mountain Coriander Moyo" uye "Purple Mountain Yellow Peach Chikafu Chakakangwa" vakasarudzwa seBRIC mabiko chikafu, uye "Purple Mountain Zvigadzirwa, BRIC Hunhu" Zishan Foods, ayo aendeswa kunze kumusika wepasi rose, aive inozivikanwa nechiitiko chepasi rose. Kugadzirwa kwekambani nekutengesa kwehwahwa hwakatinhwa, asparagus, uye renji renji pakati pepamusoro muindasitiri imwecheteyo munyika. Zishan Tomato Juice yakapihwa zita se "China Canned Food Innovation Product", uye Zishan "Bulaoquan" chave chinwiwa chakasarudzika cheXiamen Airlines.
Mumakore achangopfuura, Zishan Boka rakawedzera nesimba ketani yeindasitiri, yakaiswa mari mukuvakwa kweZishan Edible Fungus Silicon Valley Industrial Park, uye yakazvipira kuvaka China yakakura uye yepamusoro tekinoroji yechizvino indasitiri yezvikafu maindasitiri. Panguva imwecheteyo, kambani yakatora mukana wepamhenderekedzo yejogirafi uye kuferefetwa kwekutengesera EU zvegungwa (matatu chete muZhangzhou), yakawedzera 2 mitsara yekugadzira hove, yakaita mukusimudzira nekushandisa zvakakwana hove dzemumagaba dzakakwira, chirongwa ndiyo yekutanga muFujian Province, uye tekinoroji inosvika mudunhu. Yepamberi nhanho uye yakakosha musika yemakwikwi mukana.
★ National Key Leading Enterprises muKugadzira Kwemaindasitiri nemashumiro masere emunyika
★ National Kuratidzira Chirongwa cheZvekurima Zvigadzirwa Zvakadzika Kugadziridza chirongwa neNational Development & Reform Commission
★ National Key Enterprises yeEmergency Goods, ne Ministry of Commerce
Chekutanga uye Chechinomwe Chibvumirano cheNyika Kugara-ne & Yakavimbika Enterprise, neNational Indasitiri uye Commerce Administration
China Pamusoro Gumi Cannery Enterprise (Export)
★ AA Giredhi Kiredhiti Bhizinesi neCIQ
★ Wepamusoro Gumi Bhizinesi muna 2014 China Kudya Kwekuchengetedza Musangano Wegore Negore, neMusangano weMurongi
★ Provincial Key Inotungamira Bhizinesi muKurima Maindasitiri, Menduru yeGoridhe yeFujian Province Yekurima Brand Enterprise, Iyo Yakanakisa Chikwereti Bhizinesi MuFujian Province, neFujian Provincial Government